I-Tiffany's - amamitha angu-200 ukusuka esiteshini esimaphakathi
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Filiberto
Amamitha angama-200 ukusuka esiteshini esikhulu namamitha ayi-100 ukusuka eCorso Buenos Aires
Isikhundla esiphezulu ezitebhisini ezi-2 ukusuka kumugqa ongaphansi komhlaba wesi-3, umugqa woku-1 kanye nomugqa wesi-2. Eduze neSiteshi Esimaphakathi, okuwuhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka efulethini.
Sisendaweni yase-Porta Venezia/Central Station, okungesinye sesifunda esinedumela kakhulu nesemfashinini yedolobha nje uhambo lwemizuzu eyi-10 nge-metro ukusuka endaweni yokuphumula emnandi eVia Montenapoleone, Via della Spiga nasePiazza del Duomo.
Ifulethi litholakala kuphela ngamamitha ayi-100 ukusuka kulokho okubhekwa njengomgwaqo omude wezitolo eYurophu, iCorso Buenos Aires, lapho bonke abavakashi baseYurophu behlanya lapho bethenga.
Izungezwe izindawo zokudlela eziningi zawo wonke ama-cuisines omhlaba
Futhi uma ungumthandi we-opera izitobhi ezi-4 nje zemetro uzothola ithempeli le-opera: iTeatro alla Scala.
I-Milan yaziwa emhlabeni wonke njengenhloko-dolobha yemfashini nokuklama, kusukela kuleli fulethi ungakwazi ukuhamba phambi kwalabo ababhekwa njengama-boutique amahle kakhulu emhlabeni.
IMilan iphinde ithathwe njengenye yenhloko-dolobha emithathu yomhlaba ye-gastronomy kanye neNew York neParis. Thola ukuthi kungani izinyathelo ezimbalwa ukusuka kulesi sakhiwo.
Ifulethi lisesitezi sesi-3 elinesitezi sebhilidi elihle leminyaka engu-1960s futhi liqukethe indawo yokuhlala enekhishi nombhede kasofa onethezekile, igumbi lokulala eli-1 eliphindwe kabili nendawo yokugezela. I-inthanethi ye-Wifi flat inikezwe mahhala
Ifulethi elihlome ngokuphelele ngezitsha zokulala namathawula alungele ukuhlala.
4.40(284 okushiwo abanye)
4.40 out of 5 stars from 284 reviews
4.40 · 284 okushiwo abanye
Inombolo yepholisi: sub.62: 015146-CIM-03206
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R1804.